प्रेम प्रस्ताव राख्न शरीरमा आगो लगाइयो ! (भिडियो) – Dainik Sangalo
प्रेम प्रस्ताव राख्न शरीरमा आगो लगाइयो ! (भिडियो)
September 4, 2020 413
प्रेम प्रस्ताव राखेपछि स्वीकार होला वा नहोला भन्ने पीरले प्रत्येक प्रेमीलाई सताउँछ । जसले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार गराउनकै लागि नयाँ नयाँ शैली अपनाइन्छ ।
यस्ता शैली रोचकमात्र हुँदैनन् कुनै कुनै बेला बहुत खतरनाक पनि हुन्छन् । यस्तै सबैलाई चकित बनाउने घटना छ बेलायतको ।
बेलायत निवासी रिकी एश नामक एक ब्यक्तिले आफ्नी प्रेमीका कट्रीना डबसनलाई विवाहको प्रस्ताव राख्दा अपनाएको शैली डरलाग्दो मात्र छैन यो खतरनाक पनि छ । पेशाले स्टन्टम्यान रिकी विवाहको प्रस्ताव राख्न प्रेमिकाको अघि शरीरमा आगो लगाएर पुगे । त्यहाँ उनले फिल्मी स्टाइलमा घुडाँ टेकेर विवाहको प्रपोज गरे ।
उनले स्टन्ट गरिरहँदा सुरक्षाका सबै तयारी गरेका थिए । त्यसैले प्रस्ताव राख्नासाथ उनका सहयोगीले आगो निभाइ दिए । ५२ वर्षीय रिकी लामो समयदेखि स्टन्ट गरिरहेका छन् । उनले हलिउडका कैयौं ठुला स्टारकालागी स्टन्ट गरेका छन् ।
रिकीकी प्रेमिका पेशामा नर्स हुन् । उनीहरुको भेट अनलाईनमा भएको थियो । तर जब दुबैले भेटे तब उनीहरुको प्रेम टुट्ने अवस्थामा पुग्यो । खासमा कट्रीनाको उचाई ६ फिट ३ इञ्च थियो भने रिकीको उचाई केवल ५ फिट ८ इञ्च थियो । तर रिकीको प्रेम र उनको व्यवहारले कट्रीनाले उनलाई नै रोजिन् ।
Prevकाठमाडौंमा दिउँसो १ देखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै ‘होम डेलिभरी’ गर्न पाइने, यस्तो छ मापदण्डमा
Nextललितपुरमा आज बिहानैदेखि राती १० बनेसम्म कर्फ्यू, कर्फ्यू अवज्ञा गरे कडा कारवाही गरिने
राष्ट्रिय झन्डा ज’ला’उने पक्राउ, कानुनमा छ ३ वर्ष जेल सजाय
सीपीएल खेल्नका लागि सन्दीप वेष्टइण्डिजका लागि उडे, पुगेलगत्तै १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने
बुहारी श्वेतालाई मुख हेरेर सासुले दिइन् बडेमानको सुनको हार, विबाहपछि श्वेताको घरमा देखियो यस्तो रमाइलो माहोल
आज बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस : वि.सं.२०७७ साल असोज ०७ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०२० सेप्टेम्बर २३ तारिख
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (127640)
यस्ता थिए लाहुरे र स्मिताका रमाइला टिकटक जुन यादमै सिमित रहेदेशै रुवायो हेर्नुस भिडियो (97878)